အမျိုးသား ဖောက်သည်တွေနဲ့ ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက ကြက်ဥကြော်အရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင် | Buzzy
အမျိုးသား ဖောက်သည်တွေနဲ့ ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက ကြက်ဥကြော်အရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်
သူတို့ရဲ. ဆွဲဆောင်မှုက ပြင်းလွန်းပါတယ်
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်ရိုင်းက မိန်းမပျိုလေးနှစ်ဦးဟာ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ သာမန်အစားအစာကိုပဲ ဈေးဆိုင်အသေးလေးဖွင့်လှစ်ရောင်းချတာ ဖြစ်ပေမယ့် လူတွေကျိတ်ကျိတ်တိုး စည်ကားအောင် ရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထိုငျးနိုငျငံ ခငျြရိုငျးက မိနျးမပြိုလေးနှဈဦးဟာ ဘာမှမဟုတျတဲ့ သာမနျအစားအစာကိုပဲ စြေးဆိုငျအသေးလေးဖှငျ့လှဈရောငျးခတြာ ဖွဈပမေယျ့ လူတှကြေိတျကြိတျတိုး စညျကားအောငျ ရောငျးခနြိုငျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
သူတို့ဘာရောင်းတာလည်း ? Tik နဲ့ Yam အမည်ရှိ မိန်းကလေးနှစ်ဦးဟာ ထမင်းနဲ့ ကြက်ဥကြော်တွဲစပ်ရောင်းချနေတာ ဖြစ်ပြီး ၊ သူတို့ဟာ အမျိုးသားဖောက်သည်ပေါင်းများစွာ ရရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေအရ သိရပါတယ် ။
သူတို့ဘာရောငျးတာလညျး ? Tik နဲ့ Yam အမညျရှိ မိနျးကလေးနှဈဦးဟာ ထမငျးနဲ့ ကွကျဥကွျောတှဲစပျရောငျးခနြတော ဖွဈပွီး ၊ သူတို့ဟာ အမြိုးသားဖောကျသညျပေါငျးမြားစှာ ရရှိနတေယျလို့ သတငျးတှအေရ သိရပါတယျ ။
အဓိက သူတို့ရဲ. ဖောက်သည်တွေဟာ သူတို့ရဲ. အလှအပနဲ့ ရဲတင်းလွန်းစွာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက သူတို့ရဲ. ဖောကျသညျတှဟော သူတို့ရဲ. အလှအပနဲ့ ရဲတငျးလှနျးစှာ ဝတျစားဆငျယငျမှုကွောငျ့ ရောကျရှိလာတာ ဖွဈပါတယျ။
များသောအားဖြင့် သူတို့နှစ်ဦးဟာ စားသုံးတွေကို သူတို့ရဲ. မပေါ်တပေါ် ဖော်ထားတဲ့ ရင်သားနဲ့ ဆွဲဆောင်ပြီး ၊ သူတို့ရဲ. စီးပွားရေးဟာလည်း စဖွင့်ချိန်ကတည်းက အလားအလာ တော်တော်လေးကောင်းနေတာပါ။မြားသောအားဖွငျ့ သူတို့နှဈဦးဟာ စားသုံးတှကေို သူတို့ရဲ. မပျေါတပျေါ ဖျောထားတဲ့ ရငျသားနဲ့ ဆှဲဆောငျပွီး ၊ သူတို့ရဲ. စီးပှားရေးဟာလညျး စဖှငျ့ခြိနျကတညျးက အလားအလာ တျောတျောလေးကောငျးနတောပါ။
သူတို့နှစ်ဦးရဲ. စားသောက်ဆိုင်ဟာ ရောင်းကောင်းရုံတင်မကသေးပဲ ဒေသတွင်းမှာပဲ သူတို့ဟာ တဖြည်းဖြည်း ကျော်ကြားလာနေတာပါ။ များစွာသော စားသုံးသူတွေဟာ သူတို့နဲ့ ဆဲလ်ဖီလ်ရိုက်ကွင်းဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုတက်ကြပါသေးတယ်။
သူတို့နှဈဦးရဲ. စားသောကျဆိုငျဟာ ရောငျးကောငျးရုံတငျမကသေးပဲ ဒသေတှငျးမှာပဲ သူတို့ဟာ တဖွညျးဖွညျး ကြျောကွားလာနတောပါ။ မြားစှာသော စားသုံးသူတှဟော သူတို့နဲ့ ဆဲလျဖီလျရိုကျကှငျးဖို့ကိုလညျး တောငျးဆိုတကျကွပါသေးတယျ။
အသည်းကျန်းမာရေးအတွက် စားပေးသင့်သောအစားအစာ ၇မျိုး
ဂျပန်နာမည်ကြီး ကာတွန်း ''Your Name'' ကို live-action အဖြစ် ပြန်အသက်သွင်းပြီ